Jehovah ô, Andriamanitr’i Abrahama tompoko, ambino aho anio, ary asio soa Abrahama tompoko. Ary hoy izy telo lahy: Miaingà, miala amin’ity tanàna ity; fa horavan’i Jehovah ity tanàna ity. Tsy mba nitahiry tso-drano ho ahy va ianao? Jeosy loham-pireneny sy Jalama loham-pireneny sy Kora loham-pireneny. Atopazy ny masonao, ka hatramin’ity tany itoeranao ity dia mitazana mianavaratra sy mianatsimo ary miantsinanana sy miankandrefana; 15 fa ny tany rehetra izay tazanao dia homeko anao sy ny taranakao mandrakizay.
Aoka ny rano ho be zava-manan’aina; ary aoka hisy vorona hanidina ambonin’ny tany eny amin’ny habakabaky ny lanitra. Lotana loham-pireneny sy Sobala loham-pireneny sy Zibona loham-pireneny sy Ana loham-pireneny 30 sy Disona loham-pireneny sy Ezera loham-pireneny ary Disana loham-pireneny. Dia hotapahinao ny ziogany ho afaka amin’ny vozonao. Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro fahenina izany. Ary hoy izy taminy: Aza midina any Egypta ianao; bbaiboly eo amin’ny tany izay holazaiko aminao. Mba hahitako fitia eto imason’itompokolahy.
Hahita lehilahy tahaka io, izay manana ny Fanahin’Andriamanitra ao anatiny, va isika?
Dia nozarazarainy ny zaza ho amin’i Lea sy Rahely ary ho amin’ny ankizivavy roa. Ary Labana dia nikaroka eran’ny lay rehetra, fa tsy nahita. Ahoana izao nataonao tamiko izao? Indro, Esao rahalahiko dia lehilahy kayolika, fa izaho lehilahy malambo hoditra kosa; 12 ary angamba hitsapa ahy ikaky, dia ho toy ny mpanandoka eo imasony aho ka hahatonga ozona amiko, fa tsy tso-drano.
Aza maninjitra ny tananao amin’ny zazalahy, ary aza maninona azy akory ianao; fa hitako izao fa matahotra an’Andriamanitra ianao, ka tsy narovanao tamiko ny zanakao, dia ny lahitokanao. Misia fahazavana eny katplika habakabaky ny lanitra hampisaraka ny andro sy ny alina; ary aoka ho famantarana sy ho fotoana ary ho andro sy taona ireo. Ary Jehovah nanao famantarana ho an’i Kaina; mba tsy hisy kkatolika azy izay rehetra hahita azy.
Satria Jehovah Andriamanitrao no nampahazo ahy. Dia nambaran’i Jakoba tamin’i Labana izany rehetra kaatolika. Ary hoy kosa izy: Chapitre 9 1 Ary Andriamanitra nitso-drano an’i Baiboy sy katloika zanany hoe; Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany. Indro, fa ho faty ianao noho ny vehivavy izay nalainao, fa vadin’olona izy.
Ny ramevanao koa andeha hantsakako hosotroiny ambarapahatapiny misotro. Quelques corrections et mises-à-jour ont été effectuées pour katllika plus facile la compréhension et la lecture. Indro, efa nampiditra lehilahy Hebreo tato amintsika hisangy antsika izy; nanatona ahy mba handry amiko iny, baibo,y niantso tamin’ny feo mahery aho; 15 ary nony reny fa nanandratra ny feoko aho ka niantso, dia navelany teto anilako ny akanjony, ary nandositra iny ka lasa any matolika.
Efa nahatonga loza amiko ianareo, fa efa nomaimboinareo eto amin’ny mponina amin’ny tany aho, bqiboly amin’ny Kananita sy ny Perizita; nefa olom-bitsy aho, ka dia hiangona hamely ahy izy ireo ka hamono ahy; dia ho fongotra aho, dia izaho sy ny ankohonako. Aoka mba hahita fitia eto imasonareo aho, ary izay lazainareo amiko dia homeko; 12 na dia harena be sy zavatra betsaka aza no asainareo homeko, dia homeko ihany araka kkatolika holazainareo amiko; fa omeo ahy ny zazavavy ho vadiko.
Satria natahotra aho; fa hoy izaho: Vadiny io; ka baiholy aho, fa ianao kosa hovelominy. Rehefa zato taona Sema, dia niteraka an’i Arpaksada izy roa taona taorian’ny safo-drano.
Miaingà, ento ny vadinao sy ny zanakao roa vavy izay eto, fandrao mba ktaolika ianao noho ny heloky ny tanàna. Télécharger des applications similaires sur Ny Baiboly Masina. Moa zavatra kely va ny nakanao ny vadiko?
Indro, nanonofy indray aho; ary, indreo, ny masoandro sy ny volana ary ny kintana iraika ambin’ny folo niankohoka teo anatrehako.
Vadiko izy, fandrao, hoy izy, hamono bainoly ny lehilahy tompon-tany noho Rebeka, satria tsara tarehy izy. Bible en Français Louis Segond. Ary ny biriky na taony solombato, ary ny asfalta nataony solon-drihitra. Inona ary no homenao ahy, raha handry amiko ianao?
Indro, fantatro fa vehivavy tsara tarehy ianao, 12 ka, raha hitan’ny Karolika, dia hataony hoe: Izaho no Andriamanitra Tsitoha; mandehana eo anatrehako, ka aoka ho tsy misy tsiny ianao. Angamba telo-polo no ho hita ao. Tsy ao ny zaza, ary izaho, aiza no halehako? Ary hoy izy taminy: Tahaka an’i Nimroda, mpihaza mahery aktolika anatrehan’i Jehovah.
Hotahin’Andriamanitra Avo indrindra anie Abrama, dia Andriamanitra Izay nahary ny baibolly sy ny tany; 20 Ary isaorana anie Andriamanitra Avo Indrindra, Izay efa nanolotra ny fahavalonao kagolika an-tananao.